AGHA AGHA NA-AGBAGHASI EBUBO NA US, CHINA
Previous NGBAWA AL-SHABAB GBURU 17 NA MOGADISHU
Next BUHARI NYERE NDI ORU NCHE AKA IKWUSI IGBU MMADU
AKUKO UWA, Hot News, Politics
Agha agha nke onye isi ala onye isi U.S. Donald gbaghaara megide China emeela ka ọ banye n’ahịa ahịa nke mba abụọ ahụ.
Ọnụ ọgụgụ Dow Jones na-emepụta ihe na-atụle ihe karịrị narị asaa ka ndị nche na-echegbu onwe ha na esemokwu azụmahịa n’etiti akụ na ụba kasị ukwuu n’ụwa ga-arị elu, akụkọ MSN na Friday.
Iwu ndị a na-eme atụmatụ gụnyere ọnụahịa dị na $ 60 nke ọnụ ahịa ndị China na ihe mgbochi nke ntinye ego nke ndị China.
€2M ỤGWỌ ỤTỤ ISI: XABI ALONSO NA-AKPATA EGO AFỌ ISE O JI
Mr Trump kwuru na ọ na-ewere usoro ndị a maka nzaghachi nke nkà na ụzụ America ma ọchịchị Gọọmenti dị ngwa iji kwado na ọ ga-echebe onwe ya.
Ndị na-achụ ego na-echegbu onwe ha na esemokwu azụmahịa ga-emerụ ụlọ ọrụ US ma merụọ akụnụba ụwa.
Na Thursday ha gbapụrụ ebuka ma zụta agbụ, bụ nke zitere ọnụ ahịa dị elu ma na-amịpụta ala.
Site n’inwe ụba ọnụ ahịa, akụ na ụba weere ụfọdụ n’ime ọnwụ ndị kacha njọ. Ndị na-emepụta nkà na ụzụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ndị na-emepụta ihe ndị bụ isi na ụlọ ọrụ ahụike jikwa njọ.
Agha agha na-agbaghasị ebubo na US, China
Peter Donisanu, onye nyocha oru ego nke ulo oru Wells Fargo Investment Institute, kwuru na ihe ize ndụ nke ahia ahia na-abawanye ala n’ihi na ndi isi ochichi na-eleba anya n’oru ndi a na-achoghi aka na onodu aku na uba nke China.
Nke a nwere ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na ọ na-etinye tarifụ na ngwaahịa dịka ngwá electronic ma ọ bụ ngwa si na China.
President Xi Jinping nke China
Reuters na-akọkwa na agha dị n’etiti akụ abụọ kachasị ukwuu n’ụwa jupụtara ahịa China na Friday, na ihe ndị na-emepụta ihe dị n’ime obodo na-abụkarị ihe dị ka izu isii, ebe ọnụ ahịa ndị dabara adaba dị ka ndị na-etinye ego na-agbaba n’ime ihe ndị dị ize ndụ.
EVANS EKWETELA NA ONEME NTORO NA I JI EGBE EZU OHI
Ma n’adịghị ka ahịa ahịa ahịa, ahịa ahịa ego nke mba ahụ nọgidere na-adị jụụ, yana ndị nyocha na-atụ anya na nzaghachi ọ bụla nke ndị China na ọrụ ahia ahia nke U.S. enweghi ike itinye mgbanwe na iwu ego ya.
Ulo oru China kwusiri ngwa ngwa mgbe usoro mkpochapu nke Beijing maka ugwo onu ahia ruru ugbua $ 3 nke U.S. na ebubata imegwara ugwo oru U.S. n’olu nke ndi China na akwara ala di iche n’emehie.
China gbara United States ume ka ọ “duputa ya n’azụ”, ebe ụlọ ọrụ nnọchiteanya ya dị na Washington kwere nkwa na Beijing “ga-alụ ọgụ ruo ọgwụgwụ” n’ọgụ ahịa ọ bụla na United States.
Ndekọ Composite nke Shanghai mechiri pasent 3.6 na 3,152.76 isi, ebe kachasị dị ala ebe ọ bụ na Feb 9.
Akwụkwọ CSI300 nke China na-acha anụnụ anụnụ dị pasent 2.9 na 3,891.47, nke kachasị dị ala ebe ọ bụ na Feb 12.
hot Isimbido ISIMBIDONEWS ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV news POLITICS posts stock stocks worldnews